Ụbọchị My Pet » Ihe Ị Mkpa n'Ezie Ka Mara: Chivalry bụ Eze
site Ụbọchị My Pet ọrụ
Ihe Ị Mkpa n'Ezie Ka Mara: Chivalry bụ Eze
emelitere ikpeazụ: Oct. 21 2020 | 2 min agụ
Ọ na-ume site dịkọrọ ndụ omenala na-a siri ike nwaanyị onye maara otú na-elekọta onwe ya ma na-aga mgbe ihe ọ chọrọ. Ọ bụ nnọọ ike N'eziokwu, na ọ bụghị ụdị nke nwa agbọghọ na-kwesịrị nwere ụzọ emeghere ya. Na ọ ga-akwa emo na okooko osisi dị a ikwaghari ihunanya overture ma na-akwụ ụgwọ maka nri abalị dị ka mkparị ya ego onwe. A bụ ihe a na nzuzo ndị ikom: Ma ị na-ewere CEO nke otu ụlọ ọrụ si na mbụ ụbọchị ma ọ bụ na-akpa otu nwa agbọghọ onye derides jiri romance, chivalry n'ezie mkpa na-abịa n'ime play, na mgbe na-eme ka ya swoon.
Unu Sewe Okwu, Dị nnọọ Were a Chance
Mmadụ pụrụ ịrụ ụka na oge a ụbọchị, onwe ha nwaanyị nwere ike internalize chivalrous ọdịnala dị ka eme megide Feminism. Ụbọchị ndị a, ee, ndị ikom na ndị inyom bụ ndị mara mma nke ukwuu equals, ma chivalry bụ na igbanwe advocating inyom mmegbu ma ọ bụ perpetuating na-elekọta mmadụ ikpe na-ezighị ndị inyom. Naanị 7 percent nke ndị inyom na-eche dị ka chivalrous Ọrụ, dị otú ahụ dị ka ekenyenede emeghe ụzọ, bụ patronizing, dị ka Daily Mail. Ma, dị ka otu nwoke na J.Randall Daily, ndị ọzọ 93 percent nke inyom na-adịghị na-arịọ maka ihe ndị a chivalrous Ọrụ. Chivalrous undertones bụ ihe ndị inyom kwesịrị ịtụ anya, na ndị ọzọ ndị ikom kwesịrị incorporate.
Ya mere ikekwe chivalry bụghị ndị nwụrụ anwụ, ọ na-aghọtahiekarị. Louisa ekwuru ụlọ nke The Telegraph na-ekwu na ndị ikom zere chivalry na-atụ egwu na chivalrous Ọrụ a ga-misconstrued ma ọ bụ chewe na mgbaàmà. Na nke a dijitalụ oge, bụghị na-aza a ozi ederede ma ọ bụ mmasị na-Instagram foto pụrụ ikwu okwu mpịakọta, Ma dị ka ike ghọta dị ka ihe e sere ese. Anyị nwere ike ịdị a mmadụ mgbagwoju anya omenala na ihe karịrị chọpụtara na nke abụọ guesses, karịsịa mgbe ọ na-abịa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na romance. Ọbụna mgbe anyị na mba elects nwanyị mbụ president, ọbụna ma ọ bụrụ na mmadụ na-eche na-eweta Roses ga-ele anya dị ka nri idide azụ maka mmekọahụ, inyom ịghọta a onye bụ chivalrous. Chivalry na-adịghị cradling a na-emebi emebi nwaanyị n'ihi na ọ bụ a siri adaeze onye chọrọ ka a zọpụta site Prince Maa mma. Ọ bụ nsọpụrụ, a ụdị ogbugbu na ngosipụta nke ịhụnanya na nkwanye ùgwù. Women ka chọrọ ka a na ụbọchị. Girlfriends ka chọrọ-emere ofufe dịịrị. Nwunye ka na-atụ anya ga-pampered.
Olee otú na-emeso ya
Chivalry na-eme ka a na-nwoke a nwoke na nwanyị na-eche dị ka a na nwaanyị. Na-emeso nwaanyị na ndụ gị na ndị a omume nke chivalry na ihunanya mmegharị, ma ị na-aga na a abụọ ụbọchị ma ọ bụ di na nwunye ruo 10 afọ.
Iju ya okooko osisi na ya ụbọchị ọmụmụ, na Ɛpo Day ma ọ bụ nanị n'ihi na. Izipu okooko osisi, dị ka ọmarịcha FTD bilie ùkwù, nwere ike ịbụ inwe ịhụnanya cliché, ma ndị inyom ga-n'anya ogbugbu ruo mgbe ọgwụgwụ oge.
Gwa ya na ọ bụ gị nwe ihe niile. Gwa ya ihu na ihu. Ederede ya. Dee ya na a Post-ya. Dị nnọọ jide n'aka na ọ dịghị mgbe ọ na-echefu ya.
Na-eje ije dị nso n'okporo ụzọ, ma jide ya n'aka mgbe agafe okporo ụzọ. Mmetụta dị ka ma ọ bụrụ na ị na-echebe ya nchekwa bụ adọrọ adọrọ.
Were ya ka a mara mma nri abalị. Ọbụna mgbe afọ nke iri Pizza na n'ihe ndina ọnụ, a mma nri abalị rekindles na ebua. Ee, na-eje ije n'ihu na-emeghe ụgbọala ya ụzọ.
Jidere ya aka na-atụghị anya. Jide ya aka mgbe ị na-ekiri TV ma ọ bụ mgbe na akara maka kọfị. Obi ga-flutter.
Ẹkọm ya n'ọnụ ụzọ tupu a ụbọchị, na-eje ije ya ka ụzọ mgbe e mesịrị,. Nke ahụ bụ otú ọ mere na fim.
Kpọọ elele na-, kama ederede. Ọ bụ ndị na-eduga na nwaanyị na ndụ gị ma dị mkpa iji mee ka a ekwentị oku.
Otito ya. N'ihi na ọ mara mma.
5 Ụzọ Chọta Ịhụnanya nke Ndụ Gị!
Ọ na-achụ Ị? Lezienụ anya maka ihe ịrịba ama a!
11 Top Facebook pages maka dịwara Ndụmọdụ Na 2015
8 Great mbụ Ụbọchị Ajụjụ I Kwesịrị Jụọ
Ajụjụ ise Online Daters na ike gwụrụ nke anụ